Izindaba - Igama elibalulekile lefenisha ye-Amazons "ukwaneliseka"
Igama eliyinhloko lefenisha ye-Amazons "ukwaneliseka"
Igama eliyinhloko lefenisha ye-Amazons "ukwaneliseka". Ifilosofi yethu yebhizinisi iwukuhlinzeka amakhasimende ngensizakalo yokuhlangenwe nakho kwefenisha eyanelisa kakhulu. Uma benganelisekile, sizoqhubeka nokuhlinzeka isevisi yamahhala kuze kube yilapho ikhasimende lanelisekile. Isiko eliyinhloko ukwethembeka nobuqotho kanye nokuphendula ngokushesha emibuzweni yamakhasimende.
I-Amazons Furniture yasungulwa ngo-2012, ekuqaleni, yayizibandakanya kakhulu ekukhiqizeni amakhabethe aseMelika kanye nefenisha yephaneli. Manje isingumthengisi wefenisha ophakathi nendawo okwazi ukuhlinzeka ngosofa abakhuphukile, ifenisha yokhuni oluqinile, kanye nefenisha yamaphaneli.
Amagugu ethu ayinhliziyo yesiko lethu. Zisebenza njengekhampasi, ngokuthi zichaza indlela yokusebenza. Banikeza ubunye benhloso kuwo wonke amazinga okuziphatha kwenhlangano.
Umgomo we-Amazons Furniture uwukuba umhlinzeki wefenisha ochwepheshe. Ivelu eyinhloko iwukuhlanganisa umhlinzeki wefenisha ongcono kakhulu kithi ukuze sinikeze amakhasimende umuzwa wekhwalithi engcono kakhulu ngokushesha nangcono. Ngokuvumelana nobuhle bekhasimende, umklamo uphelele Ifenisha ethandwayo, yehlisa intengo yemikhiqizo, ukuze uzuze isabelo semakethe yefenisha esiningi ngangokunokwenzeka.
Ngesikhathi sobhubhane lwe-COV-19 ngo-2020, i-Amazons Furniture yagxila ekwakheni imikhiqizo emisha efanele imakethe futhi yabeka amandla engeziwe ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni ifenisha yezilwane ezifuywayo. Manje ifenisha yezilwane ezifuywayo njengezindlu zezinja, izindlu zezinja, imibhede yezilwane ezifuywayo, ifenisha yezilwane ezifuywayo njengama-cushions kancane kancane ithole imakethe entsha.